The Holy Land of Vietnamese Daraasadaha - Bogga 2 ee 24 - INTERNET OF Waxyaabaha loogu talagalay ardeyda barata VIETNAM
Iyada oo ay ku noolyihiin dad ka badan 21,946, XINH MUN waxay ku nool yihiin degmooyin xuduud ah oo ka tirsan degmooyinka Yen Chau, Degmooyinka Song Ma Moc Chau, Gobolka Son La iyo Dien Bien Dong, Gobolka Dien Bien.
THO waxay leedahay dad ka badan 76,191 deggan oo ku nool Degmadda Thuong Xuan ee Gobolka Thanh Hoa iyo qaybta galbeed ee Gobolka Nghe An.
KINH ama VIET waxaa ku nool dad ku dhow 71.3 milyan oo qof, taasoo u dhiganta qiyaastii 87% guud ahaan dadka dalka.
SAN DIU waxay leeyihiin dad qiyaastii ah 140,629 qof oo degan deganaanshaha qunyar socodka ah ee Quang Ninh, Bac Giang, Phu Tho, Bac Kan, Thai Nguyen iyo Gobollada Tuyen Quang.
THAI waxay leedahay dad ka badan 1,449,084 oo ku nool gobollada Lai Chau, Dien Bien, Son La, Hoa Binh, Thanh Hoa iyo Nghe An.
TA OI waxaa ku nool dad ka badan 38.946 oo loo qaybiyay saddex koox-hoosaadyo maxalli ah: Ta-uot (Ta Oi, Ta-hoi), Pa Co iyo Ba Hi.
Beesha SAN CHAY waxay ka kooban tahay laba koox-hoosaadyo waaweyn: Cao Lan iyo San Chi, oo wadarta guud ee dad ka badan 162,031 ay deggan yihiin.
Hits: 323 SI LA sidoo kale waxaa loo yaqaan Cu De Xu iyo Kha Pe. Waxay degan yihiin Seo Hai
NUNG waxay leedahay qiyaastii 914,350 qof oo ku urursan gobollada Lang Son, Cao Bang, Bac Can, Thai Nguyen, Bac Giang iyo Tuyen Quang.
Comments Off oo ku saabsan LUQADDA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye - shibbaneyaasha Vietnamese - Qaybta 3
LUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye… (4,506)
Booqashada Maanta: 151
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,072
Guud ahaan Wadarta: 285,967